एमालेको केन्द्रमा एकजुट, जिल्लामा गुटैगुट – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ३० पुष २०७८, शुक्रबार १६:४८ मा प्रकाशित
सुर्खेत, ३० पौष ।
नेकपा (एमाले) ले गएको मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । पार्टी फुटको पीडालाई बिर्साउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भयो । सिमित पदमा निर्वाचन भए पनि महाधिवेशनबाट अधिकांश नेताहरु सर्वसम्मत निर्वाचित भए । केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न पार्टी केन्द्रले निर्देशन नै दियो । केन्द्रीय महाधिवेशनमा जस्तै जिल्ला अधिवेशनका लागि पनि सर्वसम्मत प्रतिनिधिहरु छानिए । तर जिल्ला अधिवेशनले भने सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न सकेन ।
बरु सर्वसम्मतको प्रयास असफल भएपछि नेताहरुले फेरि पुरानै गुट व्यूँताए । अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णालीका केही जिल्लामा एमालेले निर्वाचनबाट नेतृत्व छनौट गरेको छ । प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन नै भएको छ । निर्वाचनबाटै जाजरकोटमा खिमबहादुर शाही निर्वाचित भए ।
शाहीले करवीर शाहीलाई सात मतले पछि पार्दै अध्यक्षमा निर्वाचत भएका हुन् । निर्वाचन भएको दैलेखमा भने मतदाताभन्दा बढी मत भेटिएपछि विवाद छ । त्यहाँ रवीन्द्रराज शर्मा र सूर्यबहादुर शाहीले गुटगत प्यालन बनाएर अध्यक्षको उम्मेदवार बने । निर्वाचन भएका जिल्लामा एमालेभित्र फेरि गुटगत राजनीतिको बिजारोपण भएको छ । माधव नेपालले पार्टी फुटाएपछि एमालेभित्र गुटको राजनीतिक सकिएको दाबी नेताहरुले गरेका थिए । तर जिल्ला अधिवेशनमा आउँदा एमालेमा गुटहरु सक्रिय बनेका हुन् ।
केन्द्रमा एकजुट अथार्त एउटै गुटमा रहेका नेताहरु जिल्ला तहमा आउँदा भने गुटमा विभाजित बनेका छन् । केन्द्रमा एउटै गुटमा रहेका नेताहरु यामलाल कँडेल र नवराज रावतले सुर्खेतमा भने अलगअलग गुट बनाएर आफ्नो पक्षका उम्मेदवार तयार गरे । जसले गर्दा सुर्खेतमा नेतृत्व छान्न कार्यकर्ताले मतदान नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
गुटको सुरुवात भएको एमाले सुर्खेतको अध्यक्षमा अमृतबहादुर विसी विजयी भएका छन् । विसी तीनसय ६८ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्दी डण्डीप्रसाद शर्माले दुई ६७ मत ल्याए । अन्य पदाधिकारीमा पनि विसीको प्यानल नै विजयी भएको छ । उपाध्यक्षमा कुलमणि देवकोटाले तीन ९४ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्दी ऋषि गिरीले दुईसय २६ मत ल्याए । सचिवमा कवीन्द्रकुमार केसी तीनसय ९० मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्दी रेशम रानाले दुईसय ३३ मत ल्याए ।
दुई पद रहेको उप–सचिवमा घनश्याम पाण्डेले तीन ९१ र बलबहादुर नेपालीले तीनसय ६९ मत ल्याए । कर्णालीका सल्यान, रूकुमपश्चिम, डोल्पा र जुम्लामा भने सर्वसम्मत जिल्ला नेतृत्व चयन भएको छ । डोल्पामा शेरबहादुर बुढा, सल्यानमा गोविन्द पुन, जुम्लामा शान्तिलाल महत र रुकुमपश्चिममा नन्दलाल देवकोटा सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका छन् । मुगुमा अधिवेशन जारी छ भने हुम्लामा केही दिनपछि धकेलिएको छ । कालिकोटमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास जारी छ ।
‘पराजित साथीहरुलाई पनि समेटेर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउँछौं’
केन्द्रमा एकमत र वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको एमाले सुर्खेतको जिल्ला नेतृत्व भने सर्वसम्मत हुन सकेन । गुटगत राजनीतिको सुरुवात भएको एमाले सुर्खेतको अध्यक्षमा अमृतबहादुर बिसी निर्वाचित भएका छन् । हामीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिसीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको शारांस :
सुर्खेत एमालेमा गुटहरु ब्यूताउनु भयो हैन ?
त्यसो होइन । एमालेमा गुट हिजो पनि थिएनन्, आज पनि छैन । भोलि पनि हुँदैन । सुर्खेतमा हामीले गुट बनायौं भन्ने कुरा गलत हो । सुर्खेत एमालेभित्र गुट छ भनेर कोही भ्रममा नपर्दा हुन्छ । प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेपछि गुटको सुरुवात भएन र ? प्यानल त नेतृत्व छनौटका लागि अपनाइएको विधि हो । हामीले पराजित भएका साथीहरुकै आग्रहमा निर्वाचन गरेका हौं । पराजित हुँदा पनि साथीहरु निराश हुनु भएको छैन । त्यो प्यानल मत परिणाम घोषणा नहुँदासम्म थियो । अब एमालेमा प्यानल, गुट र उपगुट नै छैन । यो अब रहदैन ।
सुर्खेत एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन तपाइँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
सुर्खेतमा एमाले एकढिक्का नै छ । तर अझै बलियो बनाउने मेरो प्रयास रहनेछ । म र मेरो नेतृत्वले कसैलाई पनि विभेद गर्ने छैन । निर्वाचनमा पराजित भएका साथीहरुलाई पनि समेटेर लिन्छु। निर्वाचनबाट आउन नसकेका साथीहरुलाई मनोनित गर्छाैँ । छिट्टै प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । इच्छा भएका साथीहरुलाई प्रदेशमा पनि समेट्ने प्रयास गर्छौँ । आगामी िन र्व ा च न म ा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सबै साथीहरु आ– आफ्नो ठाउँमा खटिने छौँ ।
विभाजन भएको बेलामा एमाले कसरी पहिलो पार्टी बन्छ ?
एमाले आज झन् बलियो भएको छ । अरुले भनेजस्ता एमाले फुटेको होइन । केही साथीहरुले पार्टी छोड्नु भएको मात्रै हो । उहाँहरु पनि एमालेमै फर्कनुहुन्छ । अबको दुई महिना पार्टीमा प्रवेश गराउने अभियान नै चलाउँदै छौँ । हामी बलियो भएकै कारण त एमालेलाई हराउन पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ नी । एमालेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुको त्याग र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामहरु देखेर जनताले फेरि पनि एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने छन् । अबको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ ।